“Waa idin Gowracayaa.”.-Laacib ka ciyaara Premier Leagu oo Kaarka Cas lagu siiyay Dhacdo YAAB leh uu ku sameeyay isla Taageerayaashiisa!! – Gool FM
“Waa idin Gowracayaa.”.-Laacib ka ciyaara Premier Leagu oo Kaarka Cas lagu siiyay Dhacdo YAAB leh uu ku sameeyay isla Taageerayaashiisa!!
Byare June 2, 2018
(Europe) 02 Juunyo 2018. Kulan Saaxibtinimo uu xulka Turkiga la yeeshay Tunisia ayaa waxaa kaarka cas loo taagay weeraryahanka xulka Turkiga iyo kooxda Everton Cenk Tosun kaddib markii uu Dil ugu goodiyay taageerayaashii dhiiro galinayay dalkiisa.
Tosun ayaa la sheegayaa inuu farta ku fiiqay Taageerayaasha uguna goodiyay inuu gowracayo isagoo gacanta luqunta mariyay kaddib markii la sheegay in qaar ka mid ah Taageerayaasha ay walxaha holca ku tuureen dhanka Qoyska Weeraryahanka Everton.
Saaxiibadiisa xulka Turkiga ayaa isku dayay inay celiyaan saaxiibkooda balse ka baxsaday isagoona u hanjabay taageerayaasha, laakiin waxaa lagu abaal mariyay in loo taagay Kaarka Cas.
Kulanka Saaxiibtinimo ee Turkiga io Tunisia ayaa ku idlaaday 2-2, Tosun ayaana Rigoore u dhaliyay xulkiisa.
Alisson Becker oo xiiseenaya u dhaqaaqista Real Madrid marka loo fiirio kooxaha kale ee daneenaya saxiixiis